Aprilia NA 850 Mana uye Honda NC 700 S DCT Midhudhudhu | Midhudhudhu Catalog pamwe nokurondedzerwa, mifananidzo, ratings, Wongororo uye discusssions
ATV Source - Press Releases - NAC kwakaita / Cannondale Pos ... (33397)
'01 1500 FI haachisiri, hapana chimvari - Kawasaki Forums (10721)
Bajaj Mutsivi 220: A Comprehensive Review Bike Blo ... (9793)
MZ Notes - Philadelphia Riders wiki Vasai (9216)
Notes musi subotnji ataure mhando (yambiro: Mikukutu uye bhowa ... (8892)
VP Racing Computer Latest News: VP anotanga UNLEADE ... (8455)
KTM dziite Blog (7646)
Honda Wave 125 Vagadzirise Manual Madzishe Guide Books (6976)
Peugeot Speedfight 2 Workshop Manual Madzishe Guide ... (6831)
Ari Yamaha dzichiri firimu Tesseract? RideA ... (6440)
Bajaj Pulsar 150 patani, ongorora, Technical Specifi ... (6008)
House uye Roti Pampanga Solana Karylle Country H ... (5492)
KTM Duke 125/200 kuwana RaceDynamics PowerTRONIC afte ... (5356)
Tikaenzanisa Between Royal Enfield Classic 350 Vs Cl ... (4922)
musha → Aprilia → Aprilia NA 850 Mana uye Honda NC 700 S DCT Midhudhudhu
19 Jun 2015 | munyori: dima | Comments Off pamusoro Aprilia NA 850 Mana uye Honda NC 700 S DCT Midhudhudhu
Nei batira uye ufambe kana unyanzvi anogona kuzviita? Automatic Midhudhudhu vari kuva chipo, asi zvinyi anobatsira, uyo zvichida Zvakakodzera haichatarisiki? Variator uye Dual-batira hutachiwana kuchienzaniswa.
A chikamu akakura zvichangobva anogadzirwa motokari iri motokari indasitiri anosiya ungano mitsetse ane otomatiki hutachiwana.
Stammtisch pakukurukurirana nenharo amenity uyu, kwemakore havachaoni, uye Kurambidzwa rusununguko kana mhosva gearshift anochema kashoma kuti mumwe munhu. Asi zvakasiyana ndozvazvakaita. Tichienzanisa Chinyorwa hutachiwana anopikira rechimanjemanje otomatiki ane fuma iri kunyaradzwa uye zvakanaka, uye nenguva yakanaka kuwedzera emuchina.
Vose avo nokusingaperi nemhepo motokari ine hunyambiri batira hutachiwana achasimbisa ichi kwazvo.
Automatic midhudhudhu vane motorcyclists, Zvisinei nokusekwa, panguva yakanakisisa, akasangana chokwadi kuburikidza kukamurwa yose "upenyu uzivi mudhudhudhu" iri kunyange kutaurwa. Asi kana vasina chokwadi avo nokusingaperi wamboona bhasikoro akadaro akaenda uye sei chaizvo basa iroro? Honda anotenda kanenge pamusoro ziendamberi kuitika uye kurwa VFR 1200 uye Crosstourer uyewo low-bhajeti mudhudhudhu.
NC 700 S uye X, kubva kune chimwezve mari 1000 euros ane otomatiki hunyambiri-batira hutachiwana (DCT).
Izvi dubious pakutanga kuona wemishonga yakanaka mudhudhudhu ine lavishly yakabereka kaviri batira munzvimbo chete kana uchitarisa Honda Integra sikuta .
Zvinonzi inobva chete injini uye pepuranga nemabhuku uye, vakasiyana makwikwi chete kuti aine chaiwo hunyambiri-batira giya hutachiwana.
The NC 700 S DCT inogona externally sezvinei haaratidzi Scooters dzavo ukama. Asi ichi chitsva uye nzira itsva chemasanganiswa urongwa pakati sikuta uye mudhudhudhu haisi. kubva 2007, ari Aprilia Mana kuri kutanga zvinogumbura.
Your 90-dhigirii V2 injini pamwe 839 cubic masendimita anobva Gilera GP 800 sikuta uye vawana zvazviri anenge kuchinja.
Kupfuudzwa reshiyo iri akaramba achinja pedyo bhandi nemotokari. Ngaangosimudza gasi uye papfungwa zvakanaka munyika. Asi munhu yaanofanira, zvisinei, kutora chinotenderera hwokufananidzira rekeni kushanda muna vanotenga.
Asi zvino ane mukuru-revving 50-CC sikuta pamberi uye hura zvakaipa, kura.
Zvinonyatsorehwa Pfungwa mana iri vakafunga kuburikidza zvizere uye
zvinopindirana. A kumanikidzwa pamusoro zvokuchunisa, uye Aprilia V2 pamwe zvinenge 76 zvapano crankshaft simba Inotubuka kuenda simba.
In soundscape ichi hapana anofunga munhu sikuta. nemaziso, ari Mana anoita zvachose Italian unyanzvi uye manzwiro, nechokwadi muna kuramba kuona nomucheka ngaigadzirwe uye zvinoshamisa zvinhu zvinhu zvakadai chinjika nokuda eccentric mazano norutsoka akamedura chitiviri uye giya mhikuriso.
uchitikurudzira, kuti ergonomics pane mukuru pamwero, kunyange kwounyengeri zvemitambo ibvi angled haisi chaizvo zvakarurama kuti pfupi mukuru vakatasva handlebars. Kana zvakadaro sikuta mudhudhudhu iri mafaro? Saka kushinga gasi vanoenda, ari Centrifugal batira uye akasiya kuedza kumanikidza kuvhara.
Nesimba sprints mberi Aprilia. Constant nguva dzose nokukurumidza, injini Inowedzera kuti Mana pithy uye punchy. Ndosaka, nekuti mukuru nechigadziko nokukurumidza pamwero anopa uchapupu torque chero nguva mberi, zvinova, zvisinei, achiperekedzwa simba vibrations.
Kutorerwa majana ose, munhu anogona kubata zvachose pamwe yakanaka mutsetse. For 229 makirogiramu zvachose uremu, ari mana anogona wakasununguka kukanda mu batsira kurereka anoswedera, ndokubva, Ichibatsirwa kwazvo kushanda Pirelli Tires, vechiStoiki uye akatsiga kutenderera dzavo.
Pashure chete hafu yeawa bvunzo nemotokari kuburikidza Black Forest, mumwe nezvishamiso sezvo traditionalist motorcyclist zvakadini unogona kuita pasina chaicho akavhiyiwa pamwe chisingadzivisiki mhinduro vapinze shanduko.
Kunyange Ultra-zvakananga, asi mirayiro zvikuru rengarava pakutevedzera gasi propulsion akabatanidzwa rinokosha. Three otomatiki modes (Pandakatenderera, mvura, mitambo) dziripo uye akasiyana kunyanya inokosha nokukurumidza siyana. Ndiani anoda kuona reshiyo pachayo, ichi sezvo pamwe Honda manually Toggle chinja kana rutsoka chitiviri kuti kuzivisa (kutsivira Honda: 250 Euro) ita.
Apo Mana nomwe predefined giya ratios dziripo sequentially. An actuator kushandura chinhambwe pakati rinonyanya chisimudziso. Nyaya iyi, zvisinei, vanoda hapana, ari Variator zvinopindirana zvose kana kuwedzera uye apo Tikapapfuura zvakanaka chete V2 injini.
Kunyange injini akaputsa torque yava namahwindo throttle wakaisvonaka kushandisika. Kutamburawo uchityaira mufaro saka pasi rekeni kwepasi? kwete.
Zvikanganiswe mufaro kutyaira kuburikidza panzvimbo husina damping unhu.
The zvachose-pasi forogo iri zvirire zvakare zvakasimba, uye chinjika mupfumvudza preload uye rebound kuvhunduka, kure zvokusagona yakaderera kumanikidzwa rwakazara. On Asphalt zvakaipa anotanga ide mana makakombama zvakanaka, verhagelt rwonzi chete mhosva chamazuva. Ndizvo zvakanaka shata.
Zvisinei ane ngozi ndiyo ABS sarudzo kuti nzendo pamwe pillion mutakurwi. Rongonyora ari TOUR Brembo calipers mu chete nzira rabidly huru discs uye kunonoka nomucheka kudzora zvikamu, ari antilock akamedura hurongwa zvachose njodzi, vaviri-murume kushanda ari rollover apo mabhureki pasina mutyairi kupindira rinenge chisingadzivisiki. The NC 700 S DCT anogona zviri nani.
Asi zvinhu zvokutanga pakutanga.
A Honda munyengeri akadana injini yacho NC pakureva simba rayo pakukurukura mazuva mashoma apfuura sezvo Diesel injini uye yandirova ezvipikiri mumusoro. Vakawanda bhasikoro izvi rakapfuura muumwe sanyanya. Upgrades vanotanga zvinofamba, kunzwa zvakanaka.
Ergonomically zvose zviri panzvimbo, uyewo nokuda Danho zvechigarire hakuna chakaipa. Pashure pokutanga injini, pakadzika, kure-mberi-akasendamira Parallel Twin anoratidza chinangwa chake pakarepo: pragmatism uye frugality.
Kurudyi handlebar mugumo iwe sarudza mumwe maviri kutyaira modes: D nokuti dzose oparesheni, S Nokuti zvishoma sportier pakufamba.
The giya yokutanga vaiita rwoga shure kunonoka. Kunyatsodzidza monyorora pamusoro throttle uye, Iii, mutoro anoita chaizvo chakaita waruka mberi. The duel panguva motokari zvakadaro pasinei 48 zvapano kunonyanyisa simba kuti mufaro chaiwo. Pretty chaizvo sei vanobatisisa yokungoi- ta bara kubva yakamira kubudirira.
Asi kunze kweguta muridzi NC unhu hwavo. Sezvo iye ane mana sechinhu kushandisika chekuchengeta mupanda ari chokunyepera tangi nokuda mukwende (muna NC kufanira wenguva-chiso ngowani, ari mana).
Ari zvirire zvakanaka chassis kuti zviri nani kupfuura Aprilia. mitambo, asi kwete zvakare vakabatisisa muidze kuvhunduka uye kwakajairika nemaforogo. Nematambudziko Makwara anonyatsooneka unexcited sezvo nyanzvi Italian, uye manageability of Honda, nemhaka yaro pasi nechepakati regiravhiti, uye pasinei gumi churu uremu kuti mureza musiyano pakati NC 700 S achiri kukura.
Kunyange pajinga mawere zvazvinosarira kugara pamusoro zvakanangwa mutsetse. Uye kana iwe waifanira miscalculated pamberi munyonga vamwe, kuti Disc rinotanga munhu mberi zvakare zvakanaka uye zvisina ngozi achibatsirwa kwakarongeka ABS.
The zvaida Chinyorwa simba iri, zvisinei, zvichienzaniswa mukuru chaizvo mana.
Zvino anoshanda sezvo hunyambiri batira hutachiwana? tsime, Rinoratidzawo chiedza uye mumvuri. Under kuramba vadzidzise otomatiki inochinja chaizvo zvakanaka uye nokukurumidza yakakwirira.
Zvichienderana throttle nzvimbo anova akagamuchirawo yakaderera kana yepamusoro nokukurumidza.
Curvy Makwara pamwe zvakasimba majana zvinoda zvishoma kubva vose vane otomatiki batanidza yakachena rokuyamura nerevane nenyaradzo kupfuma.
Nekuti dzimwe nguva Minamato haipindurwe kure zvaitika, kunyanya mu D-rudzi, chete isati munyonga panguva dzose throttle chinzvimbo achiri mumwe giya, uye zvadaro munyonga chakaderedzwa mutengo kana kushandisa gasi downshift zvakananga zvakare.
Izvi zvinoita kuti kusingafadzi gozvo padzimwe. In S muoti, Bends zhinji anoitwa nani nokuti kosi vari chaizvoizvo Anovhura.
Asi zvinogona kuitwa pano uyewo kuti risingatarisirwi munguva zvinyoronyoro kumhanyisa zvizere kurereka rimwe giya riri kumusoro, izvo zvinokonzera kanenge bundu. Mutyairi Saka akadana pamusoro kuchinja mamiriro ezvinhu aya kana kuti chinja kuti Chinyorwa muoti. Kunyanya pamberi omunharaunda zvinoshandisa pakurima inokurudzirwa kuti kushandisa ichi downshift injini braking torque kubva rechitanhatu giya kuti pfuurei 60 ? km / H anoramba vavimbisana.
Pakupedzisira muguta rinobatanidza chenguva kunetsa, kunyanya zvisingakoshi toggling pakati pamapoka. Hekuno Aprilia kuchovha zvikuru hwomutambarakede uye chivimbo Verengai zvivako zvavo, kunyanya shamwari anorimwa nyaradzo. On pfungwa asi Honda anokohwa nokuda yakaderera kuvariritira mari uye pasi mafuta kudyiwa nokuda takunda.
More kubva muchikwata ichi
Aprilia SportCity One 50 & 125 Motor sikuta Guide
Aprilia RSV4 R APRC Race Mechanics Midhudhudhu, zvishongedzo, Apparel, Parts
Quick tasva musi Aprilia Tuono V4 R APRC – Motorbike Tour News – mudhudhudhu…
Aprilia RSV4 APRC: mumwe mukwikwidzi simba
Zvimwe zvinhu muchikwata "Aprilia":
ongorora: Aprilia Dorsoduro 750 ane bhasikoro rine Multi ...
20.06.2015 | Comments Off pamusoro ongorora: Aprilia Dorsoduro 750 ane bhasikoro unhu yakawanda…
nemaonero pamusoro Aprilia Dorsoduro First 1200 & # ...
19.06.2015 | Comments Off pamusoro nemaonero pamusoro Aprilia Dorsoduro First 1200 – Aprilia kudzokorora, mudhudhudhu…
19.06.2015 | Comments Off pamusoro 2011 Aprilia SV 450-Aprili
Aprilia Scarabeo 50 Vs 100 ongorora 1 Scooters Mudhudhudhu ...
19.06.2015 | Comments Off pamusoro Aprilia Scarabeo 50 Vs 100 ongorora 1 Scooters Mopeds
19.06.2015 | Comments Off pamusoro 2009 Aprilia Mana 850 GT Review – Ultimate MotorCycling
19.06.2015 | Comments Off pamusoro 2010 Aprilia Scarabeo 200 - Used 2010 Scarabeo 200 pa Motorcyclist Magazine
WSBK Phillip Island: Laverty, Suzuki dzinenge vanoba ...
19.06.2015 | Comments Off pamusoro WSBK Phillip Island: Laverty, Suzuki dzinenge vanoba zvekuratidza Sport Rider
Quick tasva musi Aprilia Tuono V4 R APRC – Moto...
19.06.2015 | Comments Off pamusoro Quick tasva musi Aprilia Tuono V4 R APRC – Motorbike Tour News – mudhudhudhu…
Ducati Desmosedici GP11 Indian Chief Classic In mudhudhudhu Honda Moto Guzzi 1000 Daytona jekiseni mudhudhudhu Honda Dream Kids Dokitto Suzuki Colleda CO Aprilia Mana 850 Honda X4 Low Down Bajaj Discover Brammo Enertia Honda Goldwing kumumvuri M1 Suzuki B-King Final kumumvuri Smart eScooter Honda DN-01 Automatic Sports ngarawa Concept Royal Enfield bara 500 Classic Suzuki AN 650 Harley-Davidson XR 1200 mamiriro Ducati Diavel Honda DN-01 Bike Kawasaki ER-6n Bike Kawasaki Square Four Ducati 60 MV Agusta 1100 Grand Prix KTM 125 Race Concept Suzuki B King Concept